Medical Writings ဆေးပညာစာများ: HSV-1 and HSV-2 ရေယုံဗိုင်းရပ်စ်များ
HSV-1 and HSV-2 ရေယုံဗိုင်းရပ်စ်များ
I am 35years old. I got allergy3years ago. It is from one of the girls. Then T got check-up and my blood doctor said I hadaHSV1. So I want to know about HSV 1 and how can clear it off.
• Herpes simplex virus ရေယုံဗိုင်းရပ်စ် ၂ မျိုးဖြစ်တယ်။ ရေယုံဆိုတာ လိင်လမ်းကြောင်းနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ ဖြစ်တာလို့ နှစ်စားရှိတယ်။
• လိင်လမ်းမှာဖြစ်တာမျိုးက လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တယ်။ တချို့ကြ ပါးစပ်မှာ Oral herpes or Cold sores ခေါ်တာ ဖြစ်တယ်။
• HSV- 1 ကို Good herpes virus အကောင်းလို့ HSV-2 ကို Bad herpes virus အဆိုးလို့ အရပ်ခေါ်ခေါ်တယ်။
• အနုကြည့်မှန်ဘီလူအောက်မှာ အတော်ကြီးဆင်တးတယ်။ DNA မျိုးဗီဇကလဲ ၅ဝ% တူသေးတယ်။ လူ့အပေါ်ဖုံးလွှာ အပါးစာကို ကူးစက်ကြတယ်။ ၃ ပုံ ၂ ပုံမှာ ပိုးရှိပေမဲ့ ဘာမှ မခံစားရဘူး။
• Cold sores အနာမျိုးက ထိစပ်မိရာကနေကူးတယ်။ နှုပ်ခမ်းချင်းနမ်းလို့လဲကူးတယ်။ နှုပ်ခမ်းနဲ့ နမ်းစုပ်ခံရတဲ့နေရာတွေကိုလဲကူးတယ်။ ရေဖန်ခွက်၊ အရက်ခွက်တွဲသောက်လို့လဲကူးတယ်။ လက်ကိုင်ပုးဝါ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကနေလဲကူးတယ်။ ပိုးဝင်တာနဲ့ ကိုယ်ထဲမှာ အောင်းနေတော့တယ်။ အနာပြန်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ အနာမပေါ်ခင် နီပြီးဖေါင်းလာမယ်။ နာမယ်။ တခါတလေ အပူဖူးပေါက်တယ်။ စသိကာစမှာ ဖိဖိပေးထားရင် အနာမဖြစ်တော့ဘူး။
• စိတ်အားများရင်၊ နေလောင်ရင်၊ ကိုယ်ပူရင်၊ ရာသီစက်ဝန်း၊ အားယုတ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ အရက်သောက်များ၊ အစားအသောက်တချို့တွေကနေ အနာပေါ်လာတယ်။
• ပြန်ဖြစ်နေသူတွေကိုတော့ Acyclovir, Valacyclovir, Famciclovir စားဆေးတွေက သက်သာရာ ရစေနိုင်တယ်။ စောစောဆေးပေးတာ ပိုသက်သာစေတယ်။ AntiHerpes remedy ဗိုင်းရပ်စ်ဆေးပေးတာ ၉၂% သက်သာ ပျောက်ကင်းတယ်။ ဘာဆေးမှမသုံးလဲပျောက်သွားမယ်။ ဗက်တီးရီးယားဆေး မလိုပါ။ အနာသက်သာဆေး သောက်နိုင်တယ်။ ဖြစ်စေတာကိုသိရင် ဆင်ခြင်ပါ။ Herpes Simplex ရိုးရိုး ရေယုံ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/11/herpes-simplex.html ဒေါက်တာတင့်ဆွေ